फोटो फिचर Archives - Page3of7- Nawalpur Dainik
Mar202021 by Nawalpur DainikNo Comments
पत्रपत्रिकाबाट, फोटो फिचर
काठमाडौँ । डान्सर तेरिया मगर कुर्ता सुरूवालमा सजिएको तस्विर सामाजिक संजालमा सेयर गरेकी छिन् । भारतिय टेलिभिनजन डान्स इन्डिया डान्स बाट चर्चामा आएकी नायिका तेरिया फौजा मगर पछिल्लो समय चर्चमा रहिरहने सेलिब्रेटी हुन् । ‘डान्स इन्डिया डान्स’ ले नेपाली र भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रिय बनायो तरियालाई । रुपन्देहीमा जन्मेकी तेरिया लामो समय आफ्नो करिअरका लागि मुम्बईमा बसिन् । केही समय पहिले उनी एक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने खबर पनि बाहिर आएको थियो । पछि उनले आफूले फिल्ममा अभिनय गर्न नलागेको बताएकी थिइन् । क्युट तेरियालाई फ्यानले सामाजिक सञ्जालमा निकै पछ्याएका हुन्छन् । इन्स्टाग्राममा पनि उनी निकै सक्रिय रहन्छिन् । कहिलेकाहीँ इन्स्टाग्राममा लाइभ आएर उनी फ्यानसँग कुराकानी पनि गर्छिन् । इन्स्टामा उनले विभिन्न तस्वीर तथा भिडियो शेयर गर्ने गरेकी छिन् । तेरिया मगर डान्सर नभएको भय पक्कै पनि गायिका हुन्थिन...
Mar132021 by Nawalpur DainikNo Comments
गायिका समिक्षा अधिकारी पछिल्लो समयक चर्चामा छिन् । उनले, स्वर भरेका धेरै गीतहरुले बजारमा राम्रो चर्चा पाएका छन् । तर, समिक्षाको चाहना गायिकामा मात्र सिमित हुने छैन । उनले, चलचित्रको पर्दामा नायिका बन्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेकी छिन् । १४ वर्षको उमेरमा चलचित्र ‘नाई नभन्नू ल ५’मा समावेश ‘बालापनको उमेर’ बोलको गीतमा स्वर दिएर गायनमा पाइला राखेकी समीक्षाले आफूलाई नायिका पनि बन्न मन लागेको बताइन् । बाल्यकालदेखि नै आफूलाई गायनसँगै अभिनयमा पनि रुची रहेको समिक्षा बताउँछिन् । कुराकानीमा उनले भनिन्–‘मलाई चलचित्रमा नायिका भएर अभिनय गर्ने ठूलो इच्छा छ । तर, तत्काल भने होइन ।’ उनले ४–५ वर्षपछि चलचित्रमा अभिनय गर्ने सोच रहेको बताइन् । हाल कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेकी समीक्षाले भनिन्–‘अहिले त गायनलाई नै प्राथमिकता दिइरहेकी छु । त्यसमाथि अहिले पढाइमा पनि केन्द्रित हुनुपर्नेछ । ‘प्लस टु’ वा ‘ब्या-चलर...
यी हुन नायिका सुरविना कार्की हेरौ उनका लोभ लाग्दो १२ फोटो फिचर
पोखरा/ नेपाली नायिका हुन् सुरविना कार्की । अहिले उनी मुम्बईमा रहँदै आएकी छिन् । उनी केही दिनमा नै नेपाल फर्किदैं छिन् । नेपाली कलाकारहरु अहिले बलिउड चलचित्र तिर आकर्षित हुँदै गैरहेका छन् र थुप्रै उदारण पनि रहेका छन् नायिका अदिती बुढाथोकी, जेनिसा केसी, श्रृष्टी श्रेष्ठ र यति बेला नायिका सुरविना कार्की पनि बलिउडतिर फट्को मा’रिरहेकी छिन् । उनले आफ्नो अभिनय र लो’भ लाग्दो सुन्दरताले विश्वभरका युवाहरूलाई ल’ठ्ठ बनाएकी छिन् भने उनी विविध कारणले मिडियामा छाइरहेकी हुन्छिन् । कहिले उनको सुन्दरताको कारण ,कहिले उनको ड्रेसले गर्दा भारतीय लगायत नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकी हुन्छिन । सुरविनाले मुम्बईमा रहेर एउटा विज्ञापनमा काम गरिसकेकी छिन् । साथमा, सोनी टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको दिल हि तो हेमा समेत काम गरिरहेकी छिन् साथै उनी जेली विन्स एजेन्सीसँग आबद्ध भएर पनि काम गरिरहेकी छिन् । हेर्...
भूत भन्ने बित्तिकै सबैलाई डर नै लाग्ने गर्छ । सानो होस् या ठूलो भूतको नामबाट डराउँछन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नै छ । रिलमा देखिने भूतको अवतारले पनि मान्छेलाई उत्तिकै डर दिन्छ जति रियल लाईफमा कुरा गरिने भूत किन नहोस् । रिलमा देखिने भूतलाई मेकअपले बनाईएको हुन्छ । तरपनि जब पर्दामा देखिन्छ तब त्यो सबै मेकअप नै हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि डर लाग्छ । बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर पनि यस्तै डराउने लुक्समा फिल्म ‘रुही’मार्फत दर्शकमाझ आउदैछिन् । फिल्ममा शरीरमा आत्मा बसेको एक युवतीको भूमिकामा जाह्नवी देखिँदैछिन् । जाह्नवीले प्रोस्थेटिक्स मेकअपको प्रयोग गरेकी छन् । फिल्ममा सुपर नेचुरल पावर देखाउनका लागि भीएफएक्सको पनि प्रयोग गरिएको छ । फिल्मका निर्देशक हार्दिक मेहताले प्रोस्थेटिक्सपछि दृश्य सुट गर्नका लािग घण्टौ पर्खनु परेको खुलाए । ‘जाह्नवीको लुक्स पास गर्नका लागि उनले १० लुकको टेस्ट दिएकी थिइन्’,...
Mar122021 by Nawalpur DainikNo Comments
झन-झन खुल्दै अदिती, हेराैँ १० तस्बिर
पोखरा- नेपाली चलचित्र ‘कृ’बाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री हुन् अदिती बुढाथाेकी । लोकप्रिय नायक अनमोल केसीसँग फिल्म खेलेपछि नेपाली सिनेजगतमा अदिती बुढाथोकीको चर्चा निकै चुलिएकाे हाे । उनकाे जन्म झापाको दमकमा भएकाे थियाे र उनी फेसन डिजाईनर पुष्पा बुढाथोकीकी छोरी हुन् । उनले केही नेपाली र भारतीय म्यूजिक भिडियोमा काम गरेपछि उनलाई ‘कृ’ का निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गराएका थिए। त्यसपछि उनको ग्ल्यमार दुनियाँमा चर्चा हुन थाल्यो । ५ फिट ५ इन्च उचाइ रहेकी यी सुन्दरी कम बोल्ने र सरल स्वभावकी मानिन्छिन् । ‘कृ’ मा काम गरेपछि केही नेपाली र पन्जावी म्यूजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेकी अदितीको कभरेज भारतका चर्चित मिडियाहरुले पनि बेला बेलामा गर्ने गरेका छन् । उनको हट फोटो सुट र अभिनयलाई तारिफ गर्दै भारतीय मिडियाले सामाग्रीहरु प्रकाशित गरेको बिषयले निकै चर्चा पाएको थियो । उनै अदिती समाज...
Mar92021 by Nawalpur DainikNo Comments
ब्युटिफुल नायिका एलिना रायमाझीले सार्वजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर…..(१० तस्बिर सहित)
अर्घाखाँचीमा जन्मिएकी एलिना रायमाझी। मोडलिङ र फिल्ममा जम्ने लक्ष्यसाथ ६ वर्षअघि राजधानी आएकी हुन्। धुम थ्री र हिरो नं. १ मा नायिकाका रूपमा खेलिसकेकी रायमाझीले लगभग २ सय ५० वटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले दैनिक नयाँ नयाँ तस्विरहरु राख्ने गर्दछिन् ।आज भने हामीले रातो पहिरनमा उनका केही तस्विरहरु राखेका छौं ।केही समयअगाडी राजधानी दैनिकमा उनको अन्तरवार्ता छापिएको थियो । उक्त अन्तरवार्ताको केही अंशतपाईंले बिहेबारे केही सोच्नुभएको छ? विवाहबारे अहिले केही सोचेकी छैन। भोलिका दिनमा मलाई बुझ्ने मान्छे आए विवाह गर्न चाहन्छु। तपाईं कस्तो जीवनसाथी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?मलाई मेरो परिवारलाई पनि बुझ्ने केटा जीवनसाथी होस् भन्ने चाहन्छु। जसले मलाई रुवाउने काम नगरोस्। ग्लामर क्षेत्रलाई छोड नभनोस्। युवायुवतीबीच हुने प्रेम कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ, म प्रेम गरे...
यस्तो जवान भइन् नायक दिलिप रायमाझीकी छोरी दिब्या, यस्ता सुन्दर मोहित पार्ने हेर्नुहोस् (२० तस्बिर सहित)
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित नायक दिलिप रायमाझीकी छोरीपनि अब जवान भएकी छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमापनि निक्कमै अपडेट हुन थालेकी छिन् । नेपालका चर्चित अभिनेता अभिनेत्रीका सन्तानहरु समेत आजकाल नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा देखिन थालेको ट्रेण्डकै आधारमा उनीपनि चलचित्रमा हात हाल्दैछिन् । पछिल्लोपटक अभिनेत्री झरना थापाले छोरी सुहानालाई लिएर बनाएको चलचित्रले राम्रो ब्यापार गर्न सफल भयो ।यससंगै अभिनेता दिलिप रायमाझीले समेत छोरी दिब्यालाई चलचित्र क्षेत्रमा ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ । दिब्या अभिनयमा इच्छुक रहेको तर तर कहिले डेब्यु गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको बुझिन्छ । हेरौ केहि तस्बिरहरु। ...
Mar52021 by Nawalpur DainikNo Comments
चर्चित नायिका झरना थापा एक जमनाकी नम्बर एक नै थिइन। उनले खेलेका धेरै जसो फिल्म हरु समग्र मा सफल नै मानिन्छ। अहिले आएर उन्ले आफ्नि छाेरी सुहानालाइ नेपालि चलचित्र छेत्रमा उतारेकि हुन साथै सफल नायिकाको रुपमा स्थापित गाराइ सकेकिछन। चलचित्र “ए मेरो हजुर ३” बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरिकी हुन सुहाना थापा। केहि समयअघि झरना थापाको सुपुत्रि भनेर परिचय पाएकि सुहाना अहिले भने नेपाली चलचित्रकालागि उदाउँदो नायिकाका रुपमा स्थापित भएकि छिन् । नायिका झरना थापाले आफ्नि छोरी सुहानालाई समाजिक संजाल फेसबुकमा गुडियारानी भन्दै शुभकामना स्टाटस राखेकि थिइन। नायिका झरनाले अमेरिकामा पढिरहेकी छोरी सुहानालाई उनले आफ्नै निर्देशनमा तयार भैरहेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’बाट डेब्यू गराएकि थिइन् । उक्त चलचित्रमा अहिलेका जल्दाबल्दा नायक अनमोल केसि को साथ थियो र नायिका सुहानाले दर्शकबाट धेरै राम्रो प्रशंसा ...
यसरी परि जसरी खुलेकी नायिका साम्राज्ञीको सौन्दर्य, सबैलाइ मोहित बनाउने, हेराैँ उनका १० तस्विर
काठमाडौंमा मोडल महेशबिक्रम शाह र गायिका नेहा राज्यलक्ष्मी शाहको सन्तानको रुपमा जन्मिएकी साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पछिल्लो समय चर्चामा छिन् । चलचित्र ‘मारुनी’मा उनले गरेको अभिनयले धेरैको मन छोएको थियो । फिल्मका कारण मात्र नभएर साम्राज्ञी आफ्नो सुन्दरताका कारण पनि चर्चामा छिन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत उत्तिकै सक्रिय रहने साम्राज्ञी पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आएकी नायिका हुन। नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भुवन केसी निर्मित ‘ड्रिम्स’बाट अभिनय सुरु गरेकी शाहलाई पहिलो फिल्मबाटै सफलता हात पर्यो । त्यसपछि ‘ए मेरो हजुर २’ अभिनय गरेकी उनले त्यसपछि पछाडी फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । अहिलेसम्म ‘तिमी सँग’, ‘कायर’, ‘रातो टिका निधारमा’ ‘मारुनी’, ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ अभिनय गरेकी छन् । उनको पछिल्लो समय ब्रकअपले चर्चा पाएको थियो। हाल प्रेमी देवांशुसँगको ब्रेकअप पछिउनी राजकुमारी अवतरामा देखिएका तस...
नेपाली फिल्मक्षेत्र। नेपाली फिल्म क्षेत्रका धेरै जसो कलाकार अभिनयलाई लिएर भन्दा पनि बोलिलाई लिएर चर्चामा आउने गरेका छन् । कोही होस् नपुर्‍याएर बोल्दा विवा दमा तानिएका छन् भने कोही बढी बोलेर । कलाकारको बोल्ने तरीकालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल कलाकार महासंघले समेत सम्यमीत भएर आफ्नो कुरा खाख्न आग्रह गरेको छ । बोलिका कारण वि वादमा आएपछि कलाकारहरुले भने माफी माग्दै जिब्रो चिप्लिएको बताउने गरेका छन् । नेपाली सिनेमाकी चर्चित अभिनेत्री प्रियंका कार्किदेखि हाँस्यकलकारबाट नेपाली फिल्ममा प्रवेश गरेकी दिपाश्री निरौला समेत आफूले दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवा दमा परेका छन् । जिब्रो चिप्लिने विषयमा नायिकाबीच होडबाजी चलिरहँदा प्रियंका कार्किले हालसम्म भने सबैलाई पछाडि पारिरहेकी छन् । दिपाश्री निरौला– हास्य टेलीश्रींखला तीतो सत्यबाट चर्चामा आएकी दीपाश्री निरौला अहिले फिल्ममा समेत व्यस्त देखिन्छिन् । तर के...